स्वस्तिामा र पूजाको अनायासै मनमुटाव -FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
स्वस्तिामा र पूजाको अनायासै मनमुटाव
फिल्मी फण्डा । रजतपटमा कलाकारको पारिश्रमिकले राम्रै चर्चा पाउने गर्दछ । कलाकारको पारिश्रमिकले फिल्म निर्माणको लागत बढेको निर्माताहरु बताउँछन् । पारिश्रमिक अनुसारको प्रतिफल दिनेगरि काम दिन सक्छन् ? कमै कलाकारहरुले पारिश्रमिकलाई न्याय गरेको फिल्मकर्मीहरु बताउँछन् ।
फिल्म ‘हजार जुनीसम्म’को ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा नायिका स्वस्तिमा खड्काले फिल्मी करिअरमा क्यारेक्टर प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ कि पैसा भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै पैसा भन्दा क्यारेक्टर प्राथमिकतामा हुने बताइन् । उनले भनिन्,‘मेरो अहिलेसम्म कुनै समाचार पनि बनेको छैन कि स्वस्तिमाको यति लाख उति लाख पारिश्रमिक भनेर । मैले मेरो पारिश्रमिक यति हो भनेर कहिले भनेको पनि छैन। मेरा लागि महत्वपूर्ण भनेको फिल्मको टिम र क्यारेक्टर नै हो ।’
स्वस्तिमाले लेनदेन गर्ने दुवै पक्षको सहमतिमा लेनदेन हुन्छ भने जतिसुकै पारिश्रमिक पनि जायज हुने बताइन् उनले भनिन् ,–‘म चाहिँ उमेर खुलाउन सक्छु तर पारिश्रमिक खुलाउन सक्दिनँ ।’ उनले अन्तमा भनिन्, ‘गम्भीर भएर भन्न चाहन्छु, २० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक लिन्छु भने मैले ५० लाखको काम दिन सक्नुपर्छ । २० लाख १५ लाख पारिश्रमिक लिएर नाकमात्र बढाउनेभन्दा पनि त्यति रकम लिएपछि निर्माताको हातमा ५ लाख मात्र पर्यो भने त नमज्जा हुन्छ नि ।’
रजतपटका कलाकाहरुले ५० लाखसम्म पारिश्रमिक बुझ्ने गरेको खबर आउने गर्दछ । हाल सालै नायिका पूजा शर्माले नयाँ फिल्मको लागि २० लाख पारिश्रमिक बुझेको खबर बाहिरिएको थियो । स्वस्तिमाको २० लाख पारिश्रमिक सम्बन्धि धारणा पारिश्रमिको न्याय हुनुपर्ने कुरामा आएको थियो । उनले यदि पारिश्रमिक लेनदेन गर्ने दुवै पक्षको सहमतिमा लेनदेन हुन्छ भने जतिसुकै पारिश्रमिक पनि जायज हुन्छ भनेकी थिइन् ।
यसै क्रममा नायिका पूजा शर्माले फेसबुकको स्टोरी राख्नु र स्टाटस आउनुले स्वस्तिमाको २० लाख पारिश्रमिकको धारणा पूजा लक्षितझैँ देखिएको छ । फेसबुकको स्टोरीमा अरूले जसरी जज गरेपनि गरून्, गलत धारणा बनाउछन् भनेपनि बनाउन्, गसिप बनाउन्, उनीहरुको तर्क तिम्रो समस्या होईन लेखेकी थिइन् । त्यस्तै उनले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटसमा लेखेकी छिन्,– ‘मैले अहिलेसम्म पुष्टि गरेको छु ?….. तपाईले अहिलेसम्म सोधपुछ गर्नुभएको छ ? ……… यदि छैन भने…. कृपया गर्नुहोस् …. मलाई लाग्छ कि पहिले तथ्यलाई पहिचान गर्नु राम्रो हो…. सबैजना शान्त रहनुहोस्… सबैलाई मायाा…’ । स्वस्तिमाले एक प्रसङ्गमा २० लाखको चर्चा गर्नु र सोही विषयलाई लिएर पूजाले आफ्नो धारणा राख्नु अनायासै मनमुटव बढ्ने देखिएको छ ।